Ela_Williams | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အယ်လာဝီလျံ
အီလာသည်ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်. သူမသည်ခရီးသွားလာရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်သူမငယ်စဉ်ကပင်မြင့်တက်ခဲ့သည်, သူမသည်သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ရန်ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, အကြံဥာဏ်, နှင့်ခရီးသွားလိုသောလူများအတွက်ဘွတ်ကင်န်ဆောင်မှု. သူမ၏အခမဲ့အချိန်၌, သူမသည်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပုံပြင်များဖြစ်သည်. ခရီးသွားခြင်းအတွက်သူ၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုသည်သူမ၏အခြားအတွေ့အကြုံများကိုအခြားခရီးသွားနှစ်သက်သူများကိုကူညီနိုင်သည့်နည်းဖြင့်စတင်ရေးသားစေခဲ့သည် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ရေဗက္ကာကိုဆက်သွယ်ပါ